သစ်ခက်သံလွင်၊ ဘဝဖြတ်သန်းမှုမှတ်တမ်းများ၊ စိုးလွင်(၂၁၁)(ဝမ်ခ) ရဲ့ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ဘဝလမ်းများ-၈၈
on August 05, 2016 သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ - Articles
... ထွက်လာပြီး မိနစ်၂၀ အလောက်အကြာမှာ ကျနော်အရှေ့ခပ်လှမ်းလှမ်းက လူရိပ်မြင်လိုက် လို့ အောင်စိုးထွေးကိုအချက်ပြလိုက်တာနဲ့ သူလည်း သစ်ပင်အကွယ်မှာ နေရာယူလိုက် တယ်။ ကျနော်လည်း ကျောက်နံရံဘေးမှာ ကပ်နေလိုက်တယ်။ ရှေ့က လာနေတဲ့သူလည်း ကျနော့်နားရောက်ရော.. သူ့ရဲ့လည်ပင်းကို ဘယ်လက်နဲ့ဖက် ညာလက်ကသေနတ်နဲ့ သူ့နားထင်ကို ထောက် ထားလိုက်တယ်. ပြီးတော့ ကရင်ဘာသာစကားနဲ့ ကျိုးဖိုး ကျိုးဖိုး (ဗမာလို့ပြောရင် ကျောင်းသား) လို့ ပြော...
KNU တပ်မဟာ ၃ ရင်း ၇ က တပ်စုတစုနဲ့ ကျနော်တို့ကျောင်းသားတပ်စုတစု တပ်ရင်း ၈ နယ်မြေမှာ စစ်ကြောင်းတကြောင်း ဖွဲ့ဖြစ်တယ်။ ဖွဲ့ဖြစ်တော့ ကျနော်တို့ကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့ရဲ့တပ်စုမှူးဝင်းချိုက ဒုစစ်ကြောင်းမှူးဖြစ်သွားပြီး ကျနော်က တပ်စုမှူးဖြစ်လာတယ်။
ရင်း ၈ နယ်မြေထဲမှာ ကျနော်တို့တာဝန်ထမ်းနေတာ လပေါင်းများစွာကြာပါပြီ။ KNU ကေအန်ယူက ကျနော်တို့ကို ဆန်ထောက်ပံ့ပြီး ဟင်းအတွက်ကတော့ ကိုယ်ဟာကို ရှာစားပေါ့လေ။ KNU က ရဲဘော်တွေ တောပစ်ထွက်လို့ သားကောင်တွေရလာရင်တော့ အူစိုတဲ့နေပေါ့။ အများအားဖြင့်ရတတ်တာက တောဝက်၊ ဆတ်၊ မျောက်၊ ၀က်ဝံတွေပဲ။
ရလာတဲ့အသားကို ဆား နနွင်းနဲ့နယ်ပြီး ဆီမပါပြားမပါ ရေလုံပြုပ်ရတာပဲ။ ချက်ပြီးလို့ ခွဲတမ်းချရင် ရဲဘော် တယောက်ကို လက်နှစ်သစ်လောက်ရှီတဲ့အသား နှစ်တုံး သုံးတုံးလောက်တော့ ရတတ်တယ်။ ကျနော်က လူတမျိုး..အသားမပါဘဲ ထမင်းစားရတဲ့နေ့မျိုးဆို တော်တန်ရုံစားပေမဲ့ အသားပါတဲ့နေ့မျိုးဆို ဗိုက်ကာအောင် စားတတ်တယ်။ တခါတလေ ကိုယ်ကမ၀သေးလို့ ထပ်စားချင်၊ ဟင်းကလည်း ကုန်ခါနီးပြီဆိုရင်..ဟင်း မကုန်အောင် ၀ါးပြီးမျီုချလိုက်တဲ့အသားကို အာခေါင်ထဲက ပြန်ဆွဲထုတ်၊ နောက်ထမင်းလုပ်နဲ့ အတူ ပြန်စား။
ဒီလိုအစားအသောက်ဆင်းရဲရတဲ့ကြားထဲ ခရီးထွက်ပါများလို့ ကျနော့်တပ်စုတစုလုံးရဲ့ တောစီးဖိနပ်တွေ တယောက်မှအကောင်းမရှိတော့ဘူး။ တချို့ဖိနပ်တွေကို ပြန်ချုပ်ပြီး စီးလို့ရပေမဲ့ အတော်များများဖိနပ်တွေ က ပြန်ချုပ်ပြီးစီးလို့မရတော့လို့ ညှပ်ဖိနပ်တွေစီးနေရပြီး.. မြစ်ချောင်းပေါတဲ့ဒေသဖြစ်လို့ ရွံ့နွံတွေနဲ့ ညှပ်ဖိနပ်နဲ့ဆို ခရီးမတွင်တော့ဘူး။
၂ လလောက်နေတော့ ဖိနပ် ၆ ရံစာပဲ ဗဟိုကပို့ပေးလာတယ်။ တတ်နိုင်ဘူး။ ရသလောက်ပဲဆိုပြီး စခန်းနဲ့ ၃ နာရီခရီးအကွာမှာရှီတဲ့ကနစိုပင်ရွာကိုသွားပြီး ကုန်သည်ကို ဖိနပ်မှာရတယ်။
ခဏနေတော့ ကျည်အသီးကို ပြန်ထုတ်ဖို့ လုပ်ကြရော။ ဒီမှာလည်း တွေ့ပြန်ပြီ။ စိန်ပြောင်းသီးတွေရဲ့ထိပ်ကို ဖိမိလို့မတော်ရင် ကွဲမှာကို စိန်ပြောင်းထိပ်က လက်နဲ့ပိတ်ပြီး အသီးကိုသွန်ချတယ်။ ကျနော်လည်း ပြေးသွားပြီး နည်းလမ်းတကျထုတ်တတ်အောင်ပြပေး။
ဒါပေမဲ့ နောက်အသီးတွေက မထွက်တဲ့အလုံးနဲ့ထွက်သောလည်း မကွဲတဲ့အလုံးနဲ့ စခန်းသိမ်းသွား တယ်။ ဒါနဲ့ပဲ သေနတ်တွေသိမ်းပြီး စခန်းချမယ့်နေရာပြန်ရောက်တော့ ည ၉ နာရီလောက် ရှိပြီ။ ထမင်းစားရတော့ ည ၁၁ နာရီထိုးပြီ။
အဆာလွန်သွားလို့ မစားနိုင်တော့ဘူး။ စားပြီးလို့ ပင်ပမ်းလွန်တာနဲ့အိပ်လိုက်တာ မနက် ၂ နာရီ လောက် လာနိုးလို့ကြည့်လိုက်တော့ KNU ရဲဘော်လေး..ဘာလဲလို့မေးကြည့်တော့ ကင်းအလှည့်တဲ့။
မနက်မိုးလင်းတော့ ဗိုလ်တတို့နဲ့အတူထွက်လာလိုက်တာ တဲအိမ်စုတခုဆီ ရောက်သွားတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ကို ရွာသားတယောက်နဲ့အတူ ဒီနေရာမှာထားခဲ့မယ်လို့ ဗိုလ်တပြောတယ်။ ကျနော်တို့ရဲဘော်တွေရှိရာ နွားလေးခိုကို ကျနော်တို့သွားလို့ရလာမေးတော့..လမ်းမှာ ရန်သူနဲ့လည်း တွေ့နိုင် တယ်။ KNU အဖွဲ့ငယ်လေးတွေနဲ့လည်း လူမှားပြီးပစ်ခတ်နိင်တဲ့အတွက် မသွားဖို့ပြောတယ်။ ဗိုလ်တတို့ ကျနော်တို့ထားပြီးထွက်သွားတော့ ကျနော်စဉ်စားရပါပြီ။
ကျနော်တို့ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတကွ သေအတူ ရှင်မကွာ ရန်သူကိုတိုက်ချင်သည်။ ဒါဆို ဘယ်လို လုပ်မလဲ။ ကျနော်တို့ရဲဘော်တွေရှီရာ နွားလေးခိုကို သွားရမည်..လမ်းမှာ ရန်သူနဲ့လည်း တွေ့နိင်တယ်။ KNU နဲ့တွေ့ပြီး လည်း မှားပစ်ခံရနိုင်တယ်။ (ကျနော်တို့ပုံစံတွေနဲ့ စစ်ဝတ်စုံဟာလည်း ရန်သူနဲ့သိပ်မကွဲဘူး)
ကျနော်တို့နှစ်ယောက်မှာ ကျနော်ဟာ တာဝန်အရှီဆုံးနဲ့ ကိုယ့်ဆုံဖြတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ လုပ်နိုင်ပေမဲ့.. ဒီလမ်းကို သွားရင် ရန်သူနဲ့ရော ကိုယ့်မဟာမိတ်နဲ့ရော တိုက်ပွဲဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်တွေက နှစ်ယောက်ထဲမို့ သေဖို့လမ်းများသည်အတွက် အောင်စိုးထွေးကို တိုင်ပင်ကြည့်တယ်။
ငါသွားချင်တယ်၊ မင်းရောသွားချင်လား မေးကြည့်တော့ အကို့သဘောတဲ့။ ငါ့သဘောမလုပ်နဲ့ မင်းရော သွားချင်လာ ပြန်မေးတော့..သူလည်း ဒီမှာမနေချင်ဘူးတဲ့၊ ရဲဘော်တွေရှီရာ နွားလေးခိုကို သွားချင်တယ်တဲ့။ ဒါဆို ဟုတ်ပြီး သွားကြမယ်ဆိုတော့ ကျနော်စဉ်းစားရပြန်ပြီ။
တကယ်ဆို ကျနော်က တပ်စုမှူး သူကရဲဘော်ဖြစ်တော့ သူကို ပွိုင့်သွားခိုင်းရမှာ။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်က အသက် အထိုက်အလျောက်ရပြီ၊ လောကအကြောင်း တချို့တ၀က်သိနေပြီ။ သူက အဲဒီအချိန်မှာ ၂၀ ပတ်ဝန်းကျင် လောကအကြောင်း ဘာမှမသိသေး။
(၂) ငါ ဒဏ်ရာရလို့ မပြေးနိုင်ခဲ့ရင် မင်းကို ငါ ကာပစ်ပစ်ထားပေးမယ် မင်းပြေးပေတော့ (သံယောဇဉ်တွယ်ရင် နှစ်ယောက်လုံးသေမှာ)...
အံ့သြစရာကောင်းတာက အဲဒီအချိန်တုန်းက စိတ်လုံးဝမလှုပ်ရှားဘဲ တည်ငြိမ်စွာလှုပ်ရှားခဲ့တာပဲ။ ထွက်လာပြီး မိနစ်၂၀ အလောက်အကြာမှာ ကျနော်အရှေ့ခပ်လှမ်းလှမ်းက လူရိပ်မြင်လိုက် လို့ အောင်စိုးထွေးကို အချက်ပြလိုက်တာနဲ့ သူလည်း သစ်ပင်အကွယ်မှာ နေရာယူ လိုက်တယ်။ ကျနော်လည်း ကျောက်နံရံဘေးမှာ ကပ်နေလိုက်တယ်။ ရှေ့ကလာနေတဲ့သူလည်း ကျနော့်နားရောက်ရော.. သူ့ရဲ့လည်ပင်းကို ဘယ်လက်နဲ့ဖက် ညာလက်ကသေနတ်နဲ့ သူ့နားထင်ကို ထောက် ထားလိုက်တယ်. ပြီးတော့ ကရင်ဘာသာစကားနဲ့ ကျိုးဖိုး ကျိုးဖိုး(ဗမာလို့ပြောရင် ကျောင်းသား) လို့ ပြော...ကိုယ်ကလည်း ကရင်စကား ဒီလောက်ပဲရတော့ ကိုယ့်ထက်ပိုပြောတတ်တဲ့ အောင်စိုးထွေးကို လှမ်းခေါ်ပြီး ပြောခိုင်းရသေး တယ်. အောင်စိုးထွေး ရှင်းပြနေတဲ့ချိန်မှာ ကိုယ်ကလည်း အင်္ကျီလက်မောင်း တံဆိပ်ကိုပြပြီး ကျောင်း သားဖြစ်ကြောင်းပြောရသေးတယ်။ ဒီကရင်က ပထမတော့ ရုန်းတာပေါ့။ ကျနော်ကလည်း မလွတ်တမ်း ဖက်ထား၊ အောင်စိုးထွေးက ရှင်းပြနဲ့မှ ငြိမ်သွားတယ်။
၀မ်ခ(ဟောင်း)က ဆုတ်ခွာလာတဲ့ကျနော်တို့တတွေ ၀မ်ခ(သစ်)မှာရှိနေတဲ့ ရဲဘော်တွေနဲ့ ပြန် လည် ပေါင်းစည်းမိကြပါပြီ။
စခန်းကိုရောက်ရောက်ခြင်း ဆေးမှူးကိုသိန်းထွန်း(မြောက်ပိုင်းတွင် ထောက်လှမ်းရေးဟု မှားယွင်းစွပ်စွဲ ဖမ်းဆီးခံရပြီး လွတ်မြောက်လာသူ) ရဲ့လက်ထောက်အဖြစ် ၀ိုင်းကူညီ။ နောက်တော့ ကိုသိန်းထွန်း က မြောက်ပိုင်းကို တာဝန်နဲ့ထွက်သွားတော့ ဆေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူရတယ်။ ကျနော်က ဆေးသင်တန်း လည်း တက်ထားတာမဟုတ်၊ ဒေါတ်တာသောင်းထွန်း တပ်ရင်းမှာရှိစဉ်တုန်းက လူနာကုရင်း သင်သွား တာရယ်၊ ကိုသိန်းထွန်းသင်ပြပေးတာတွေနဲ့ ကုရတာပါ။ အဓိကကတော့ ဌက်ဖျားဖြစ်ရင် ဘယ်ဆေးပေးရမယ်…ဆေးဘယ်လိုထိုးရမယ်.. ဒရစ်ဘယ်လိုသွင်းရမယ်..အကြောဆေး ဘယ်လို ထိုးရမယ် ဆိုတာ သိထားတာပါပဲ။
ဒီလိုအသိလေးနဲ့ကုရင် တွေ့ရတဲ့အလွဲပေါင်းများစွာကိုပြောရရင် …မြင့်အောင်(ချက်ကြီး) ငှက်ဖျား တက်လို့ ဒရစ်ချိပ်တာမှာ.. အားဆေးဗူးထဲကို ကွီနင်တွေထိုးထည့်ပြီး အမြန်သွင်းလိုက်တာ.. မကြာပါဘူး မြင့်အောင် တယောက် ဆေးမူးပြီး အံလိုက်တာ မသေရုံတမယ်ပါပဲ။
သူ့အဖေက သူ့သား အားဆေးသွင်းချင်လို့လာခေါ်တာပါ။ ကျနော်လည်း ငှက်ဖျားပျောက်ခါစမို့ အားမရှိ။ ဒါနဲ့လိုက်သွားပြီး အားဆေးသွင်းဖို့ ဆေးပုလင်းထဲက ဆေးကိုစုပ်တာ..အားမရှိလို့ လက်တွေတုန်နေတာကို လူနာရှင်ကြည့်တဲ့အကြည့်က..အားမနားတတ်ရင် သူ့သားချီပြီး ထွက်ပြေးချင်တဲ့ပုံမျိုး…..နောက် တယောက်က အောင်သန်း(ဇာသပြင်)..
ဒါနဲ့ ကျနောလည်း ခပ်တည်တည်နဲ့ပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်။
သူကိုလည်း ဆေးထိုးရတာပဲ။ ဒီတခါတော့ အပ်လဲမိပေမဲ့ အပ်ထိပ်ဖျားက နည်းနည်းလေးကောက်နေပုံရတယ်။ လူနာဖင်ကိုထိုးချလိုက်တာ အပ်ထိုးတာနဲ့မတူဘဲ တံဇင်နဲ့ထိုးချသလိုပဲ။ တဗျစ်ဗျစ်နဲ့ အသားထဲကိုဝင်သွားတာကို မြင်နေရတယ်။
ဒီလူလည်း ကျနော့်ဆေးခန်းကိုလာတာ နောက်ထပ်မတွေ့ရတော့ဘူး။ ကျန်မာရေးတသက်လုံးကောင်းသွားပုံရတယ်။ ဆေးစွမ်းပုံများနော်…။
ဒါနဲ့ရွှေဉာဏ်တော်စူးရောက်ပြီး လူ ၁၀ ယောက်စာ ၂၀ စီစီပြွန်နဲ့စုပ်။ တယောက်ချင်းဆီခေါ်ပြီး အပ်မလဲဘဲ (အပ်ရှားပါးတာရော..အပ်လဲဖို့ ကိုယ်သောက်ပျင်းထူတာရော) ၂ စီစီဆီ ထိုးပေး လိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်က AIDS အေအိုင်ဒီအက်စ် မပေါ်သေးလို့ထင်တယ်။ တယောက်မှဖြစ်သံ မကြားရဘူ။ အခုဒီလူတွေ နိုင်ငံခြားတွေရောက်ကုန်ကြပါပြီ။ ကျနော့်အကြောင်းတွေးပြီးများ ကျေးဇူးတွေ တင်နေမလား…တင်နေလေမလား။
စစ်လည်း တိုက်၊ ၀မ်ရေးလည်း လုပ်
“ နွေရောက်လာပြီ။ ရန်သူက မီးလောင်ဗုံးတွေ ပစ်တော့မယ်။ မင်းရဲ့ဘန်ကာအမိုးတွေ ဖျက်ထားတော့” လို့ အတူနေအဘဗိုလ်မန်းဘိုက သတိပေးတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ နောက်နေ့မနက် ၄ နာရီလောက်ထ၊ ကိုယ့်အရှေ့တောင်ကုန်းမှာကလည်း ရန်သူက ပွိုင့်ဖိုက် စက်သေနတ်ကြီးနဲ့ 76 နောက်ပွင့်ရိုင်ဖယ်က ဆင်ထား။ တပ်စိတ်မှာကလည်း အသက်အကြီးဆုံးနဲ့ တာဝန်အရှိဆုံးက ကိုယ်ပဲဖြစ်နေတော့..ကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲ ဘန်ကာအမိုးပေါ်တက် အမိုးကို ဖြည်းဖြည်းဖျက်ချ။။ ရဲဘော်တယောက်ကိုတော့ ရန်သူပစ်မှာကို ကြည့်ခိုင်းထားရတယ်။
ပွိုင့်5ပစ်ရင် ကျည်ဆံလာရာလမ်းကြောင်းက မီးတန်းကြီးဖြစ်နေတော့..မီးကျည်တန်းမြင်ရင် ရဲဘော်က သတိပေး။ ကိုယ်ကခုန်ဆင်း ၀ပ်နေတော့ပဲ။ ရန်သူကလည်း ဘယ်အချိန်ကထဲက ချောင်းနေလည်းမသိဘူး။ ဖျက်လို့ တ၀က်လောက်လည်းရရော ပစ်တော့တာပဲ..။ ကိုယ်တွေအတွက်ကံကောင်းတာက နောက်ပွင့်ရိုင်ဖယ်မပစ်တာဘဲ..၊ ပစ်ရင် မချောင်ဘူး..ဒီလိုနဲ့ပဲ ပစ်ရင် ခုန်ချပုန်းလိုက်၊ အပစ်ရပ်ရင် တက်ဖျက်နဲ့ မိုးလင်းတော့လည်း ဖျက်တာ ပြီးသွားတာပဲ။
ကင်းအလှည့်ပြီးတော့ ၄ နာရီကနေ ၆ နာရီအထိတာဝန်ကျတဲ့ အောင်ဝင်းကိုနှိုး၊ အောင်ဝင်းနဲ့ ကင်းလဲပြီးတော့ ကျနော်လည်း မအိပ်တော့ဘဲ ဘန်ကာအကွယ်ကလေးနားမှာ ဆေးလိပ်သောက်နေ လိုက်တယ်။ ခဏနေတော့ အောင်ဝင်း ကျနော်ဆီရောက်လာပြီး ဓာတ်မီးနှစ်လက်အတွက် ဓာတ်ခဲ တောင်း တယ်..။ ကျနော်လည်း ထုတ်ပေးလိုက်တယ်...မကြာပါဘူး အောင်ဝင်းဆီကနေ ဓာတ်မီးအရောင်တွေ ထွက်လာလို့ သူဆီပြေးသွားကြည့်လိုက်တော့..
အောင်မယ်လေးဗျာ.. ကိုယ်တော်ချောက ဓာတ်မီးနှစ်လုံးပြိုင်တူဖွင့်ပြီး အရှေ့တောင်ကုန်းက ရန်သူကို ဝှေ့ပြနေတယ်။ ကျနော်လည်း သူ့ကိုရပ်ခိုင်း..၊ ဆူလဲဆူ..ပြီးတော့ ဓာတ်မီးနှစ်လက်လုံး သိမ်းပြီးတဲ့ အချိန်မှာ..ရန်သူလက်နက်ကြီးက မီးရောင်မြင်တဲ့ ကျနော်တို့နေရာကို လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ပါပြီ။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်လည်း ဘန်ကာထဲပြေးဝင်..။
အပစ်ကျဲသွားတာနဲ့ ဒီကောင်တွေအုပ်စုလည်း အပြင်ကိုပြေးထွက် ရရာသစ်ကိုင်းနဲ့ မီးကိုရိုက်သတ်။ ပြီးမှ မီးလောင်ဗုံးကျတဲ့နေရာကိုတူးပြီး ဗုံရဲ့ဒလက်ကိုယူ..မီးလောင်ဗုံရဲ့ဖင်ကဒလက်က ဒန်သတ္တု ဆိုတော့ ရောင်းစားလို့ရတယ်လေ..။
(ကေအန်ယူကလည်း ထွက်တူးကြတော့...သူ့အဖွဲ့ ကိုယ့်အဖွဲ့ အပြိုင်အဆိုင် တူးလိုက်ကြတာ၊ နောက်ပိုင်း အရနည်းမှာစိုးလို့ ဘန်ကာထဲပါမ၀င်တော့ဘဲ နီးရာအပင်မှာကပ်နေကြလို့ ဘန်ကာထဲ ၀င်ဖို့ မနည်းပြောယူ ရတယ်။ နောက်တော့ ကေအန်ယူနဲ့ကျောင်းသားတွေဆွေးနွေးပြီး..ဘယ်အပင်နဲ့ ဘယ်အပင်ကြား က ကေအန်ယူပိုင်..ဘယ်အပင်နဲ့ ဘယ်အပင်ကြားက ကျောင်းသားပိုင်ဆိုပြီး ခွဲထားလိုက်တော့..လက်နက် ကြီးပစ်ပြီးမှအေးအေးဆေးဆေး ထွက်တူးရုံပဲ)။
နောက် ၃...၄ရက်နေတော့ ထုံစံအတိုင်း ထိုင်းဘက်ကမ်းမှာ ကျဉ်ခွံဝယ်တဲ့ ကားလာတော့ ကြက်ရိုး ငါးကြီးနဲ့ အလဲအလှယ်လုပ်ကြပေါ့။ ပြီးတော့ ပျော်ပျော်ပါးပါး ချက်စားကြပေါ့။
(၀န်ခံပါသည်...ရဲဘော်တွေ ထွက်တူးတော့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှစိုး၍ နူတ်အားဖြင့် မတူးဖို့ တားခဲ့ပါသည်။ ဒါပေမဲ့ စားရ၀ါးရတော့မည်လို့ ကြိုမြင်နေတော့ ကျနော့်မျက်နှာက ပြုံးနေပါလိမ့်မည်။ ထိုကြောင့် ညီလေးတွေရဲ့စွမ်းအားနဲ့ရရှိတဲ့ ထိုဟင်းကိုစားရချိန်မှာ ရှေ့မျက်နှာနောက်ထား၍ ရင်ထဲတွင် ရှက်ရှက်နဲ့ စားခဲ့ရပါကြောင်း…)